SOMALITALK - SEATTLE, WA
5 Somali ah oo maanta laga tarxiili lahaa Seattle oo la baajiyey
shan nin oo soomaali ah oo maanta laga dhoofin lahaa magaalada Seattle ee gobolka Washignton, soomaaliyana loo dhoofin lahaa ayaa dib loo dhigay, dadaal eey bixiyeen xarunta Perkins Coie ee qareenadda ee ugu weyn Seattle, xaruntan oo si bilaash ah soomaalida ugu dooday.
nimankan shanta ah ayaa lagu heystay danbiyo isugu jira; daroogo isticmaalida iyo ku xadgudib sharciyada waaxda socdaalka ee Mareykanka.
garyaqaanada u doodaya ayaa ku murmaya in u celinta raggan soomaaliya loo celinayo macneheedu yahay" khatar galin naftooda" maadaama " eeysan wax dowlad dhexe ah oo tabar lihi eeysan soomaliya ka jirin imminka " .
Qareenada soomaalida ayaa sidoo kale ku eedeeynaya waaxda socdaalka & dhalasha bixinta Mareykanka (INS)-tu ineey ku fashilmeen ineey fuliyaan sharci dowladda dhexe (federel law) leedahay oo sheegaya in (INS)-tu marka hore idan ama oggolaansho ka heysato waddanka qofka la dhoofinayo, intaan la tarxiilin.
Qaali dowladda dhexe ayaa ku amray in nimankan la sii hayo si ku meel gaar ah, bishan Nov 22keeda ayuuna u qabtay ineey maxkamadda horyimaadaan oo eey soo bandhigaan kiiskooda.
(INS)-ta ayaa iyana dhankooda sheegay ineey ka shaqeynayaan " sidii eey u heli lahaayeen fasaxa ama oggolaanshaha maamulka meelaha eey soomaailda u dhoofinayaan" sida sharciguba qabo.
afhayeen (INS)-ta u hadlay ayaa ku dooday" maalin kasta ayaan dad dhoofinaa" wuxuuna raaciyey " laakiin sheekadani kuwa kale waa ka duwan tahay" .
urur ka soo horjeeda tarxiilka, islmarkaana u dooda xuquuqda shaqsiga oo seattle xafiis ku leh ayeey haweeney madax ka ah oo la yiraahdo Pramila Jayapal ayaa tiri " nimankan hadii soomaaliya loo dhoofiyo waa la dilaa" .
shantan ayeey da'ayaashoodu u dhexeysaa 22 - 38, wexeeyna mareykanka soo galeen intii u dhexeysay 1992 ilaa iyo 1997, midkooda ugu yar ayaa ah arday dhigta Kulliyad, wuxuuna bartaa Cilmunafisiga (psychology) wuxuuna u shaqeeynaa shirkadda weyn ee AT&T, ninkan ayaa dhowr mar looga digay in la tarxiili doono hadii uusan xadgudubyada joojin.
waxaa xiiso leh in sharciyaqaanada sida bilaashka ah ugu doodaya soomaalida eey tusaale iyo jaangooynba u soo qaateen keeys woxoogaa yara shabaha midkan oo Minnesota ka dhacay kal hore, markaas oo qaali reer Minnesota ah uu ku amray (INS)-ta ineeysan dhoofin nin soomaaliyeed oo isna danbiyo lagu heystay oo la yiraahdo Keyse Jamac.
" hadii eey nimankani Kenyaati ahaan lahaayeen, waxaan oo dhib ah maanan soo mareeen" sidan waxaa yiri Kevin Magnuson oo ah sharciyaqaankii u doodayey Keyse Jamac ee gobolkan Minnesota.
" Kenya dowlad shaqeyneysa ayaa ka jirta, laakiin hadii soomaaliya loo tarxiilo raggan, macneheedu waa dhimasho ku xukumid, dhac & qafaalasho eey hore u soo arkeen, ka hor intaaneey soo caga dhigin Mareykanka" ayuu yiri Mr Magnuson oo tulaase u soo qaatay waddanka Kenya.
Shariciyaqaan Nick Gellert oo ka mid ah kooxda imminka u doodeysa shantan soomaalida ah ayaa yiri " dowladdu ugu yaraan waa ineey ku dadaashaa ineey soo hesho waddanka kale oo nimankan aqbalaya" sida uu dhigayo sharciga dhexe ee Mareykankana, qofka waa loo tarxiili karaa waddan aan aheyn kii uu u dhashay, hadii waddankaasu oggolaado. laakiin lama hubo ineey dowladdu iskuba dayday taas, mana u maleynayo in dad daroogo lagu soo qabtay cid rabtaayi jirto.
nin soomaali ah oo saaxiib la'ah qaar ka mid kuwa dhoofis sugayaasha ah ayaa ku cabaaday " nimankan haddii loo dhoofiyo meel eeysan beeshoodu joogin, waa la dilayaa 100%" .
Billowgii sanadkan ayeey aheyd markii dhowr iyo toban soomaali ah oo qaarkood reer Seattle ahaayeen la tarxiilay, gabar kamid ah kuwaas la tarxiilayna wexeey warbaahinta u sheegtay iyadoo Muqdisho joogta inaan loo sheegin waxa lagu heysto, xitaa eey waqti eey lacagteeda kula soo baxdo bangigeeda loo diiday, ha yeeshee xafiiska shariciyaqaanada Perkins Coie ayaa ku doodaya ineey ka warheleen dadkii oo la dhoofiyey mar kaliya.
dhawaanahan waxaa soo badanayey xariga & dhoofiska lala beegsanayo soomaalida Mareykanka, oo intooda badan lagu helo qaad cunid, ama ka ganacsiba, si kastaba ha ahaatee Magaalada Seattle ee gobolka Washington ee xuduuda la leh Vancouver, Canada waa meelaha eey ugu badan yihiin soomaalida Mareykanka oo dhan.